Umkhiqizi kanye Umhlinzeki WeBhodi Lakwa-Melamine Roc
I-ROCPLEX Melamine Board iyipulangwe elenziwe ngekhwalithi ephezulu futhi lisebenza, lisetshenziselwa kakhulu ukuhlobisa iNdlu, ukukhiqizwa kweKhabethe, ukukhiqizwa kwefenisha njll.
Melamine plywood uhlobo plywood zokuhlobisa eyenziwe plywood futhi melamine iphepha.
Ipulangwe iMelamine, libizwa nge-HDF kweminye imakethe.
I-ROCPLEX melamine plywood isebenzisa ikhwalithi ephelele yomgogodla wokhuni oluqinile futhi yenziwe ngekhono elikhethekile lokukhiqiza. Ngemuva kokuqeda i-baseboard, izofakwa emshinini wokucindezela oshisayo oyinqubo ezenzakalelayo ngokuphelele. Ingahlukaniswa ngezigaba ezehlukene ngeglue esebenzisa.
I-ROCPLEX ihlose ukukhiqiza i-melamine plywood yemvelo kanye neplywood eqinile nekhwalithi yekhwalithi.
ROCPLEX Melamine Plywood Imininingwane
Ubuso / Emuva: 2 ohlangothini lwe-polyester / iphepha le-Melamine
Umongo: Izinkuni eziqinile ezigcwele
Ubukhulu: 4-28mm (ukushuba evamile: 4mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
Umswakama Okuqukethwe: 8-14%
Ubuningi: 530-780kg / m3
■ Izinhlamvu zezinkuni ezifana neTeak / Oak / Maple / Beech / Sapele / White ash / Red walnut
■ Umbala owodwa njengoMhlophe, Omnyama, Ophuzi, oBlue, i-ect. Ungakhethwa ngokukhululekile yikhasimende
■ Ubuchwepheshe bendawo buqonda okusanhlamvu kwezinkuni, uMat, oCwebezelayo, oPhakeme, oKhanya ngeSoft
ROCPLEX melamine ibhodi Inzuzo
■ Amandla okugoba okuphezulu nokubamba ngezipikili okuqinile.
■ Ngaphandle kokuphamba nokuqhekeka, ikhwalithi engaguquguquki.
S Ukwakha umswakama nokwakhiwa okuqinile.Akukho ukubola noma ukubola.
■ Ukungcola okuphansi kwe-formaldehyde.
■ Kulula ukubethela, ukusika nokusika. Kungasika amatshe abe yizimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zokwakha.
■ Umbala ofanayo nesibambo esihle, Izinhlobo zombala noma ubuchwepheshe bangaphezulu ongakhetha kubo.
ROCPLEX melamine ibhodi Isicelo
Ibhodi lenqola ye-Flower melamine lisetshenziswe ikakhulukazi emakethe yaseNetherlands / Holland noma eDenmark.
ROCPLEX melamine ibhodi Ukwakhiwa Sibutsetelo
Izitifiketi ze-plywood: Sithole izitifiketi ezifana ne-ISO9001-2000, ISO14001-2000, SONCAP, PVOC, CARB, CE, Kenya PVOC, Kuwait KUCAS, Saudi Arab SASO, Algeria CAP, Nigeria SONCAP, Uganda PVOC, SGS plywood ect ect .
Langaphambilini MDF / HDF
Olandelayo: I-OSB (ibhodi ye-strand esuselwe)